Iyini iphupho lommese wensimbi?
Yini engingayilindela uma ngiphupha ngommese ephusheni lami?
Ukumelwa kommese kumuntu ngamunye kubangela izinhlangano ezahlukene. Lokhu kungaba ukusika okudingekayo, ngaphandle kwalokho ongenakukwenza ngaphandle, futhi kwabanye, isikhali esiyingozi sithwala ukwesaba nokwesaba. Ngemikhono ihlotshaniswa nezibonakaliso eziningi nezinkolelo. Kubahumushi, iphupho lemimese lisesigaba sokubaluleka, ukunganaki okuyiziwula, futhi ngezinye izikhathi kuyingozi empilweni. Ukuze uqonde ukuthi yiziphi izixwayiso kanye nezinguquko eziletha lezi zinto zensimbi ekuphileni kwethu, funda lesi sihloko. Zama ukukhumbula ngokunemba ngangokunokwenzeka isakhiwo nemininingwane encane yokulala.
Umkhwa uphupha ngani?
Abahumushi abaningi bephupho bayavuma ukuthi ummese uyisimanga esibi, ukuphikisana nezingxabano ezinkulu emsebenzini nasemndenini, ukuhlukunyezwa. Kunezimo ezibucayi nezimo eziphupha okudingeka zibhekiswe kuzo, ngoba zithonya ukuchaza okunye.
Thola ukuthi ummese ukhuluma ngani, lapha .
Ummese okhaliphe kahle, ukhuluma ngenani elikhulu labantu abafisa ububi bakho, balungele nganoma yisiphi isikhathi sokushaya emuva. Ngeke bazibonakalise kuze kube mzuzwana lapho ithuba livela ukwenza intuthuko. Zama ukulalelisisa nokugwema ukuthintana oseduze nabantu abangajwayelekile;
Iphukile - i-harbinger yenkani emndenini futhi isebenza. Kukhona okungafaniyo, uma usuka ezinhlelweni, ngengozi, uzodala izinkinga. Qaphela konke ukubonakaliswa kosizo bese uzama ukukhathazeka kakhulu lapho usebenzelana nezihlobo;
Rusty - ukuhlukaniswa zakuqala kusuka othandekayo wakho noma othandekayo. Mhlawumbe, ulahlekelwe imizwa futhi ukuze uvimbele ukuphenduka okwenzekayo, wenze umcimbi ohlanganyelwe, kunikezwe ukunakwa okunye kunokujwayelekile;
Ikhishi - maduzane uzoba nomkhosi emndenini womndeni noma kumbuthano wabangane abaseduze nabajwayelene nabo;
Ummese ongcolile uyisibonakaliso sokuhlangenwe nakho okuzayo esikhathini esizayo sezihlobo noma othandekayo. Njengomthetho - okungenangqondo;
Ukuxoshwa - ubudlelwane empilweni yomuntu buzohlahloka ngokuqinile, izingxabano zizoqala ngesisekelo semali, impahla ehambayo futhi engashenxiswanga, kuze kube yilapho kuqhekeka ubudlelwane.
Ngaphandle komese ngokwayo, umphuphi angabona izenzo ngezinto, ezibuye zihumushe:
Ukuphonsa into ethile noma othile uthi ngendlela engalungile ekhethiwe. Ungase uphule umthetho noma wenze izinto zokuziphatha okubi okudingeka uzame ngokuphuthumayo. Uma ungalandeli iseluleko ngokushesha, kungase kube nemiphumela ebuhlungu;
Ukwehlisa ummese ephusheni kuyisixwayiso sokuthi kudingekile ukuba uqaphele ngamazwi akho nezenzo zakho. Ungakhulumi ngezinto ongazi, thula uma ungaqiniseki ngokufanele kwamagama akho, kungenjalo izinkinga zebhizinisi zingase ziphakame;
Ukwesaba ummese wephupho - emsebenzini uzozama ukuyisebenzisa ngezinhloso zabo zenkosi. Ngisho nokuxolisa noma ukuzondwa okungabonakali komunye umuntu osebenza nabo kungenzeka;
Ukulahlekelwa yendaba kuhunyushwa njengokudumazeka komlingani okhethiwe ebuhlotsheni bomuntu siqu;
Inxeba lommese lenzelwe wena - esikhathini esizayo, lungiselela ithonya lengqondo kusuka ohlangothini, uzama ukuxhaphaza umbono wakho nokuziphatha kwakho. Ngokuvamile, akuholeli kunoma yini enhle.
Sekuyisikhathi eside, insimbi ebandayo ibhekwa njengophawu lokwesaba, ukuhlukunyezwa, ukubulala nokwesatshiswa. Umqondo wethu ongaqondakali uye wakuqonda ngokucacile lokhu futhi, njengesibonelo sommese, ubonisa ukuxoshwa okuzayo, okunikeza ithuba lokuthonya izenzakalo. Ukuyisebenzisa noma cha ukukhetha wonke umuntu.
Ukuchazwa kwamaphupho ngamakhowe
Yini ojwayeleneyo ephupha ngayo? Ukuchazwa kwamaphupho
Iyini iphupho lephupho
Isifo sokufa okungazelelwe ezinganeni
Ukwazi izinaliti zezinwele ezingenamikhono zezingane
Imithetho yokunakekelwa kwemibala yasekhaya
Yini engenakwenziwa ngesikhathi sokukhulelwa?
Ngamaphi amagama abantu abathanda ukuwazwa
Ukuqhathaniswa kwemvelo ngendlela ye-thirties
I-Sauce kusuka eshizi enesikhunta
Sandwich nge sprats
Isibalo esihle esivela kuJoyce Vedral
Uma singenandaba lutho nomfana, sithandana ngempela?
I-Kefir hair mask: zokupheka ezilula zokupheka ekhaya